Ngaba Ukunqula Kukuzimela Ngesebe Lenkawu? | Imibuzo Neempendulo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Ngaba Ukunqula Kukuzimela Ngesebe Lenkawu?
Abantu bakwenza oku kuba bezikhohlisa ngelithi izinto ziza kulunga kuba bephepha ukumelana neengxaki. Ngokomzekelo, abanye abantu babalekela etywaleni xa besengxakini. Ekuqaleni, utywala busenokubenza bazithembe baze bacinge ukuba banokujamelana namanzithinzithi obomi. Kodwa ekuhambeni kwexesha, bayenzakala. Ngaba kunokwenzeka into efanayo naxa umntu ebalekela elunqulweni?
Abanye bathi ukuba likholwa, kuba ubaleka iingxaki kunokunceda. Bacinga ukuba abantu ababhenela enkonzweni abakwazi ukucinga okanye bavumele ubungqina obucacileyo buphembelele iinkolelo zabo. Abantu abathetha ezo zinto benza ngathi xa umntu elikholwa elizinikeleyo uzama nje ukuphepha iingxaki zobomi.
Ininzi into ethethwa yiBhayibhile ngokholo. Sekunjalo, ayikhe ikhuthaze ukungazinaki izinto yaye ayikuxhasi ukubekwa kwengqondo emthunzini. Ngokwahlukileyo koko, ithi umntu okholelwa yonke into ethethwayo akanamava, yaye ide ithi usisidenge. (IMizekeliso 14:15, 18) Eneneni, ibiya kuba bubudenge ngathi ukuyamkela ingcamango ethile njengeyinyaniso sibe singakhange sizihlole izibakala! Bekuya kufana nomntu osela iparafini kuba nje umntu othile ethe kuye ngamanzi.
Endaweni yokuba ikhuthaze ukumfanyekiswa, iBhayibhile iyasibongoza ukuba sigcine amehlo ethu engqondo evulekile ukuze singeyeli. (Mateyu 16:6) Sihlala sithe qwa ngokusebenzisa ‘amandla ethu engqiqo.’ (Roma 12:1) IBhayibhile iyasiqeqesha ukuba sikwazi ukuqiqa sisebenzisa ubungqina ukuze sikwazi ukwenza izigqibo ezisengqiqweni nezisekelwe kwizibakala. Khawuhlolisise eminye yale mizekelo ekwiincwadi zikampostile uPawulos.
Xa uPawulos wayebhalela ibandla laseRoma, akazange afune bakholelwe kuThixo kuba esitsho, kodwa wabakhuthaza ukuba bazihlolele ngokwabo ubungqina bokuba uThixo ukho. Wabhala oku: “Iimpawu zakhe [uThixo] ezingabonakaliyo zibonwa ngokucacileyo ukususela ekudalweni kwehlabathi kuse phambili, ngenxa yokuba ziqondeka ngezinto ezenziweyo kwanamandla angunaphakade nobuThixo bakhe, khon’ ukuze bangabi nakungxengxezeleka [abo bakhanyela igunya likaThixo].” (Roma 1:20) UPawulos wasebenzisa kwale ndlela yokuqiqa xa wayebhalela amaHebhere. Wathi: “Ndlu nganye inomakhi wayo, kodwa lowo wazakhayo zonke izinto nguThixo.” (Hebhere 3:4) Kwileta awayibhalela amaKristu aseTesalonika, uPawulos wawakhuthaza ukuba angakholelwa kuyo yonke into ayivayo. Wayefuna ‘aqiniseke ngezinto zonke.’—1 Tesalonika 5:21.
Ukholo lunokuba likhaka elisikhuselayo
Ukholo olungasekelwanga kubungqina obaneleyo lunokumlahlekisa umntu aze enzakale. Ngokuphathelele amanye amakholwa omhla wakhe, uPawulos wabhala oku: “Ndinikela ubungqina bokuba banenzondelelo kuThixo; kodwa kungekhona ngokolwazi oluchanileyo.” (Roma 10:2) Ngenxa yoko, kubaluleke gqitha ukusebenzisa icebiso likaPawulos awalinika ibandla laseRoma! Wabhala: “Guqukani ngokutshintsha ingqondo yenu, ukuze nikungqine ngokwenu ukulunga nokwamkeleka nokugqibelela kokuthanda kukaThixo.” (Roma 12:2) Ukuba nokholo olusekelwe kulwazi oluchanileyo ngoThixo, asikokuzimela ngesebe lenkawu xa uneengxaki, kunoko luba ‘likhaka elikhulu’ elisikhuselayo ngokomoya nangokweemvakalelo.—Efese 6:16.